ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သွားရောက်သူများကို စစ်တပ် တားမြစ် | ဧရာဝတီ
ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သွားရောက်သူများကို စစ်တပ် တားမြစ်
ရန်ပိုင်| January 25, 2013 | Hits:4,731
| | လဂျားယန် ဒေသရှိ KIA စစ်သားတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ငြိမ်းချမ်းရေး ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကချင်ဒေသသို့ သွားရောက်သော ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်နှင့် ၅ ဦးကို လိုင်ဇာမြို့မှ ၁၅ မိုင်ခန့် အကွာသို့ အရောက် အစိုးရ စစ်တပ်က ဆက်လက်မသွားရန် တားမြစ်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ရက်မှ ကိုနေမျိုးဇင်နှင့် အဖွဲ့သည် တာဝန်ရှိသူများ တားမြစ်နေသည့်ကြားမှ လဂျားယန်မှတဆင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO) ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့သို့ သွားရောက်လို သည်ဟု အကြောင်းပြ ထွက်ခွာလာရာ နယ်မြေလုံခြုံရေးနှင့် မိုင်းအန္တရာယ်ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် ဒေါ့ဖုန်းယန် မြို့နှင့် ၅ မိုင်ခန့် အကွာတွင် လာလမ်းသို့ ပြန်လည်စေလွှတ် ခဲ့သည်ဟု ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများ၌ ရေးသားထားသည်။
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်က“ဒေါ့ဖုန်းယန် ဗျူဟာကုန်းဘေးက ဖြတ်ကတည်းက သူတို့သိနေတာပဲ မတားဘူး၊ ခက်ခက်ခဲခဲ
သွားပြီး လိုင်ဇာ ရောက်ခါနီး ခါယာတောင်ခြေ သိန်းဆင့်လမ်းခွဲ ရောက်မှ စစ်ကြောင်းကားတွေရောက်လာပြီး ဗျူဟာမှူးအမိန့်ဆိုပြီး တားမြစ်ခံရတာ စိတ်မကောင်းဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်က လာရောက် တားမြစ်သည့်အရာရှိများက ရှေ့လမ်းခရီးတွင် မိုင်းအများအပြား ရှိသည့်အတွက် အန္တရာယ်များကြောင်း ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုသည်ဟု ကိုနေမျိုးဇင်က ပြောသည်။
၎င်းတို့ လာရောက်သည်ကို ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)ကလည်း ဒေသခံများမှ တဆင့်သိရှိကြောင်း၊ ယခုပဋိပက္ခတွင် မည်သည့်ဘက်မှ ရပ်တည်ရန်မဟုတ်၊ ကချင် ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြောကြားလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို နားထောင်ပြီး ပြန် လည် စေ့စပ်ရန် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လမ်းခရီးတလျှောက်တွင် လက်နက်ကြီးကျည်များ ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှု၊ မိုင်းခွဲမှုများကြောင့် တံတားများ၊ လမ်းများ ပျက်စီး နေ သည့် စစ်၏ အနိဋ္ဌာရုံများကို မြင်တွေ့ရကြောင်း၊ ဆွဲမိုင်း၊ နင်းမိုင်းနှင့် အဝေးထိန်းမိုင်း အများအပြား ထောင်ထားသည်ဟု ဒေသခံများ ကလည်း ပြောဆိုကြောင်း၊ လိုင်ဇာအနီးတ၀ိုက်တွင် အစိုးရ စစ်တပ် စစ်ကြောင်းများ သွားလာလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ထိုးစစ်လည်း ကျရောက်လာနိုင်ကြောင်း ကိုနေမျိုးဇင်က မျက်မြင် အခြေအနေကို ပြောပြသည်။
“စစ်ဆင်ရေးက တနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ ရဲဘော်တွေမှာ ဆံပင်တွေလည်းရှည်၊ ကွမ်းဆေးလိပ် ငတ်ပေါ့၊ ကျနော့်ကား မြင်တော့ ပြေးလာပြီး ငြိမ်းချမ်းချင်ပြီလို့ ပြောတယ်၊ ၀မ်းနည်းစရာပါ”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
အလားတူ ကချင်၊ ရှမ်း၊ လီဆူး စသည့်ဒေသခံများလည်း စစ်၏ဆိုးကျိုးများကို ခံစားနေရကြောင်း၊ ဘွဲ့ရပညာတတ် အမျိုးသမီးများကိုလည်း စစ်မှုထမ်းရန် အဓမ္မခေါ်ဆောင်မှုများ ရှိကြောင်း၊ စစ်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်ကာလတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းများကို သိမ်းဆည်း ထား ၍ နေအိမ်များနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်မရသည့် အတွက် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးရန် တိုင်ကြားမှုများကိုလည်း ကြုံခဲ့ရကြောင်း ကိုနေမျိုးဇင်က ဆက်ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ရေး အတွက် နှစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရန် မေတ္တာရပ်ခံလို ကြောင်း၊ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းစေရန် လူထုအင်အားဖြင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင် သွားဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ့ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ရက် အနေဖြင့် ဗန်းမော်- ဒေါ့ဖုန်းယန် လမ်းတလျှောက်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ခြုံစောင် နှင့် အနွေးထည်၊ အစားအသောက်များကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ လိုင်ဇာမြို့အထိ ပထမဆုံး အကြိမ် လမ်းလျှောက် ချီတက်သည့် လှုပ်ရှားမှု တခုကိုလည်း ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက စတင်ခဲ့ကြသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> shingran brang January 25, 2013 - 10:18 pm	အစိုးရ လျှို့ဝှက် အကြံအစည် နဲ့ ကွဲလွဲနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 26, 2013 - 3:34 am	နောက်တန်းမှာ နွေးနွေးထွေးထွေး လုံခြုံစွာနေပြီး တိုက်မိန့်ပေးနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေပါ အရှေ့တန်းမှာ သွားနေသင့်တယ်။
Reply	AunG January 26, 2013 - 7:13 am	Why burmy army stop their way…? i suspect burma army generals/leaders don’t want Really Peace for Burma.
Reply	mm January 26, 2013 - 8:03 am	aww
Reply	ကချင်မြေ January 26, 2013 - 11:07 am	ရဲဘော်နေမျိုးဇင် လုပ်ရပ်ကို လေးစားပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါ ပြည်သူ့ ဗိုလ်ကြီးရေ
Reply	Shwe Hinthar January 28, 2013 - 5:38 pm	So, the Myanmarese junta does not want to see peace. Right? If people cannot express what they believe, why do they still talk about democracy then? Is the junta joking?